Dhamaan Habeenkii sano 2 4 bilood ka hor #924
Noqo xubin Rikoooo hadda in ka badan 6 bilood, ugu dambeyntii wuxuu isu soo dubay inuu isbarasiyo naftayda maadaama aanan ka maqnayn illaa iyo hadda si aan xoogaa wanaagsan u helo P3D Waqti dhegahayga ku hoos jira!
Magacaygu waa Mick, oo waxaan ahay Lossiemouth ee Iskodland, hadda waxaan u shaqeeyaa sidii Farsamo yaqaan Avionics Technician RAF. Waxaan rajeyneyaa inaan waxbadan ka baranno P3D oo ka yimid kuwa khibradda u leh oo aan rajaynayo ka dib u gudbinta aqoontayda cusub ee cusub ee mustaqbalka.
Dhamaan Habeenkii sano 2 4 bilood ka hor #925
Waad salaaman tahay Mick,
Ku soo dhowow madasha, waad ku mahadsantahay isbarashadaada.
Waxaan rajeynayaa inaad ku raaxeysan doonto golahan, golahan oo dhan waa mid cusub oo ubaahan howlo sidaa darteed fadlan ha ka labalabeyn inaad halkaan ku dhajiso oo aad aqoontaada qiimaha badan u soo bandhigto kuwa kale.
Dhamaan Habeenkii sano 2 4 bilood ka hor #926
Haa, anigu kan labaad ayaan ahay! Soo dhawow, oo waad ku mahadsan tahay adeeggaaga!